के टिकटकमा लाइभ बस्नेबित्तिकै पैसा कमाइन्छ? टिकटकले बढाउँदैछ, भिखारी र सेलिब्रेटी ! - Sano Aawaj
भाईरल हुने चक्करमा जस्तोसुकै जोखिम मोल्नसमेत तयार हुन्छन् । यीमध्ये कसैको मृत्युसमेत भएको पाइन्छ । सेती नदीमा टिकटक बनाउँदा एक युवतीको मृत्यु र दाङका एक युवा झोलुंगे पुलबाट खसेर मृत्यु यसैको उदाहण हुन् ।
Posted in Breaking news 1, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, रोचक खबर
Prevकोरोनाका कारण युगाण्डामा दुई वर्षसम्म विद्यालय बन्द, अब बल्ला खुला हुँदै
Nextकालिज मार्न जङ्गल गएका ६ जनाले अर्कै गरेपछी !